Maxaa ka dhalan kara hadii Somaliland loo aqoonsado dal madax banaan? – Somali Top News
Maxaa ka dhalan kara hadii Somaliland loo aqoonsado dal madax banaan?
March 26, 2019 April 2, 2019 Somali Top News	0 Comments
Maamulka iskeeda ugu dhawaaqay madaxbananida ee Somaliland oo horaantii 1991 sheegay in Soomaaliya inteeda kale ay ka go’day islarkamana muddo ku dhaw 30 sano raadineysa aqoonsi caalami ah ayaa hadda waxey u muuqataa mid halgankeedu uu ku dhaw yahay miro dhal.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in la joogo waqtigii ay kala bixi lahaaayeen Soomaaliya, kadid markii uu ka soo laabtay safar shaqo uu uu ku tagay dalka Imaaradka Carabta.
Sidoo kale dalalka Geeska Africa ayaa bilaabaya olole cusub oo isdhexgal ah Somaliland waxey ka faa’ideysaneysaa halka ay ku taalo iyo fulinta qorshe walba oo dhulkeeda laga damacsanyahay si loogu aqoonsado dal madax banaan oo isku filan.
Dhawaan waxaa magaalada Haregysa ka dagay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Ereteriya waxeyna Somaliland kala hadleen xiriir dibloomaasiyadeed, mid dhaqaale iyo mid bulsho, sidoo kale waxey Eretariya u sheegtay Somaliland iney kala shaqeyneyso sidii ay kaga go’i laheyd Soomaaliya inteeda kale.
Somaliland ayaa sidoo kale xiriir la yeelatay Dowladda Itoobiya ee uu hogaamiyo Abyi Axmed iyagoo kawada hadlya xiriikooda iyo isbadalka uu Abyi Hogaaminayo ee isdhaxgalka Geeska Africa.
Somaliland ayaa sidoo kale gacan saar la leh Imaaradka Carabta waxeyna ka heshaa dhaqaalo farabadan, Imaaradkana wuxuu hoos ku wataa xulufo dhowr oo qorsheynaya in Somaliland loo aqoonsado dal madax banaan.
Marka hore waxaa meesha kabaxaya hadii Somaliland loo aqoonsado dal madax banaan halgankii awoowayashena Soomaaliyeed ay kaga xureeyeen gumeysiga guud ahaan dhulka Soomaaliya, in ay Soomaaliya kala go’go’dana waxaa wanaag u arka dhamaan cadowgeena oo ay ugu horeeyaan dalalka deriska la ah Soomaaliya ee Qaarada Africa iyo dalal Carbeed oo qas ka dhexwada Soomaaliya.
Waxaa hubaal ah hadii Somaliland ay noqoto dal madax banaan in Puntland ay ka go’eyso Soomaaliya inteeda kale, hadii Puntland ay go’adana waxaa ku xiga Galmudug, Hirhabelle, Jubbland, Koofur Galbeed iyo gobalka Bnaaadir.
Soomaaliya waxey noqoneysa sida Jaziirado kala go’san oo kale, korna waxaa kala socda oo ka gumeysan doono dalal quwado shisheye ah, qaran iyo qabiil islama galaan Soomaalida qabiil ayaa kala geynaya.
Soomaalida waa dal wax walba isla wadaago sidan dhaqan, Af, Diin iyo Midib sinaba uma kala maarmaan, iney midoowaan oo dalka dib loo yagleelo wax u dhaama malahan.
← Ilhan Cumar oo la kulmeysa cadaadis xoog leh oo kaga imaanaya Yahuuda
Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya oo kulamo la qaadanaya madaxda Galmudug →